Ahoana ny fametrahana AceStream amin'ny Linux ary tsy maty manandrana | Avy amin'ny Linux
Isika izay tia fanatanjahan-tena ary tsy afaka mampiasa ireo fantsom-panatanjahantena rehetra amin'izao fotoana izao, amin'ny ankapobeny dia miatrika ny olana fa raha te hankafy azy io dia tsy maintsy mampiasa pejy isan-karazany mampita lalao amin'ny Internet, mangataka ny ankamaroan'izy ireo mametraka AceStream, izay mirona ho somary sarotra apetraka amin'ny Linux.
Amin'ity toro-lalana ity dia hampianatra ny fomba mametraka AceStream amin'ny Linux tsy maty tamin'ny andrana, manome vahaolana amin'ireo olana fahita ankehitriny. Ny fampiasana azy sy ny atiny hidiranao dia andraikitrao manontolo.
1 Inona no atao hoe AceStream?
2 Ahoana ny fametrahana AceStream amin'ny Linux
2.1 Mametraha AceStream ao amin'ny Arch Linux sy ireo derivatives
2.2 Mametraha AceStream amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
2.2.1 Ampidiro ny AceStream amin'ny Ubuntu 14.04 ary ny derivatives
2.2.2 Ampidiro ny AceStream amin'ny Ubuntu 16.04 ary ny derivatives
Inona no atao hoe AceStream?
AceStream Izany dia sehatra multimedia tena zava-baovao, izay nitondra ny famoahana audiovisual amin'ny Internet amin'ny sehatra avo kokoa. Ho an'izany dia nametraka manager manerantany amin'ny famoahana rakitra multimedia, izay mampiasa ny haitao P2P mandroso indrindra, manome antoka ny fomba fitahirizana angon-drakitra sy fandefasana fampitana.
Ny rindrambaiko Ace Stream dia manome antsika tombontsoa marobe izay ahafahantsika manasongadina:
Azo atao ny mijery fampielezam-peo amin'ny Internet (fahitalavitra, renirano manokana, sarimihetsika, sarimiaina sns), miaraka amina kalitao avo lenta sy feo.
Mihainoa mozika an-tserasera amin'ny endrika tsy very kalitao.
Jereo renirano an-tserasera, tsy mila miandry azy misintona tanteraka.
Jereo ny atiny amin'ny fitaovana lavitra (Apple TV, Chromecast, sns.) Amin'ny alalàn'ny protokolan'ny serasera toa ny AirPlay, Google Cast sy ny hafa.
Mamela ny fampidirana amina fampiharana samihafa.
Ahoana ny fametrahana AceStream amin'ny Linux
Mba hametrahana AceStream amin'ny Linux dia tsy maintsy manaraka dingana isan-karazany arakaraka ny distro ampiasainay izahay, hifantoka amin'ny Arch Linux sy Ubuntu izahay, saingy manantena izahay amin'ny ho avy fa afaka mametraka azy io amin'ny distro hafa.
Mametraha AceStream ao amin'ny Arch Linux sy ireo derivatives
Ny tena antony lehibe nanaovako an'ity lahatsoratra ity dia satria maro no nanana olana tamin'ny fametrahana AceStream tao amin'ny Arch Linux, Antergos, Manjaros ary ny derivatives, ny antony lehibe indrindra dia ny fanamboarana ilay plugin. acestream-mozilla-plugin Manome lesoka rehefa mametraka, tsotra be ny vahaolana.
Hametraka ny acestream-mozilla-plugin izay hametraka antsika ihany koa maotera acestream y acestream-player-data inona ny fonosana ilaina hamerina AceStream avy amin'ny firefox.
Voalohany indrindra dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary manao izao baiko manaraka izao:
Hamboarina ny olan'ny fanamarinana izay manakana ny fametrahana ny fiankinan-doha ilaina hametrahana acestream-mozilla-plugin.
Avy eo dia manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay
Amin'ny fotoana miverimberina dia hanontaniana isika raha te hametraka fiankinan-doha isan-karazany isika, tsy maintsy milaza eny amin'ny rehetra.
Mametraha AceStream amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Ampidiro ny AceStream amin'ny Ubuntu 14.04 ary ny derivatives
Ho an'ireo mpampiasa ubuntu sy derivatives hatramin'ny 14.04, dia ho tsotra ny fametrahana AceStream, tsy maintsy manatanteraka ireto baiko manaraka ireto avy eo amin'ny terminal fotsiny izy ireo:
akony 'deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ mahatoky tena' | sudo tee /etc/apt/source.list.d/acestream.list sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add - sudo apt-get fanavaozana sudo apt-get install acestream-full
Ampidiro ny AceStream amin'ny Ubuntu 16.04 ary ny derivatives
Ireo izay mila miady mafy bebe kokoa dia ireo mpampiasa Ubuntu 16.04 sy ny derivatives satria ny acestream dia tsy manana fanohanana an'ity kinova ity, fa noho io lahatsoratra, Vitako ny nametraka azy.
Ny zavatra voalohany hataonay dia ny misintona sy mametaka fiankinan-doha izay tsy ho azonao sintonina avy amin'ny trano firaketana ofisialy, alao antoka fa hametraka ireo mety ho an'ny rafitry ny distro anao:
Ampidino sy mametraka libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb azonao atao ity amin'ny rohy manaraka: http://launchpadlibrarian.net/216005292/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb
Sintomy ary apetraho amin'ny filaharana aseho ireto fiankinan-doha manaraka ireto: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_amd64.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_amd64.deb Azonao atao ny misintona ny tsirairay avy amin'ity rohy manaraka ity: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Ampidino sy mametraka libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb azonao atao ity amin'ny rohy manaraka: http://launchpadlibrarian.net/216005191/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb
Sintomy ary apetraho amin'ny filaharana aseho ireto fiankinan-doha manaraka ireto: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_i386.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_i386.deb Azonao atao ny misintona ny tsirairay avy amin'ity rohy manaraka ity: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Avy eo isika dia tsy maintsy manohy amin'ny fametrahana mahazatra ny AceStream tahaka izay nataontsika ho an'ny kinova 14.04, manokatra terminal ary mihazakazaka:
Amin'ny tranga sasany dia ilaina ny manomboka ny serivisy acestream-engine.service, noho izany dia ampiasainay avy amin'ny terminal ireto baiko manaraka ireto:
systemctl manomboka acestream-engine.service systemctl mamela acestream-engine.service
Amin'ity fampianarana ity dia antenainay fa afaka mankafy an'ity fotodrafitrasa fampitana multimedia marobe izay mampiasa ny fahafaha-manao ny teknolojia P2P ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fametrahana AceStream amin'ny Linux ary tsy maty manandrana
Julio Cesar Campos dia hoy izy:
Ny lahatsoratra fa farafaharatsiny ao amin'ny archlinux ary ity no tranga ilainao: "systemctl start acestream-engine.service" ary "systemctl ahafahan'ny acestream-engine.service" miasa izany.
Valiny tamin'i Julio Cesar Campos
Ianao ve nisedra azy tamin'ny firefox, sa nampiasa browser hafa ianao?
UserDebian dia hoy izy:
Misy mahalala ny fomba hampiasana azy io amin'ny Debian 9?
Valio amin'i UserDebian
Firefox amin'ny archlinux
gecoxx dia hoy izy:
Tsy haiko raha navoaka ny hevitro teo aloha ... averiko ihany! Mila tsy haiko hoe adiny firy no fanatanterahana ny baiko tsy fantatra ao amin'ny terminal, ary apetrako –noconfirm, ary amin'ny farany tsy mandeha izy !!
lahatsoratra hafa tsy misy ilana azy!
fanandramana fametrahana an'i Manjaro
Valio i gecoxx
Ry malala fa tsy nety taminao, dia niasa lavorary tamiko, na izany aza manandrama manatanteraka ireto baiko 2 ireto:
"Systemctl start acestream-engine.service" ary "systemctl mamela acestream-engine.service"
Vitako ny nanao ny dingana rehetra tsy nisy olana. Fa rehefa manandrana manomboka ny serivisy amin'ny terminal dia nanome tsy fahombiazana roa aho;
systemctl manomboka acestream-engine.service
Tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny maotera acestream.service: tsy misy ny acestream-engine.service unit.
systemctl mamela ny acestream-engine.service
Tsy nahomby tamin'ny fampiharana: Tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany
Ny zavatra mitovy no nitranga tamiko. ny terminal dia mamoaka ireo baiko ireo ho ahy amin'ireo tsy fahombiazana ireo.
Juan M dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra! Raha mampiasa bita Ubuntu 16.10 64 ianao dia tsy ho afaka mametraka "acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb". Tsy maintsy misintona sy mametraka ireto fonosana ireto aloha izy ireo:
Angamba ilaina fiankinan-doha hafa izay ao amin'ny repos.
Valiny tamin'i Juan M
Miles dia hoy izy:
Ny acestream-mozilla-plugin dia nijanona tsy niasa tao amin'ny Firefox 52, toy ny plugins NPAPI maro hafa.
Mamaly an'i Miles
darco dia hoy izy:
Safidy iray hafa tena tsara sy tsotra ny fampiasana docker ary lasa agnostika amin'ny rafitra fiasanao. Amin'ny alàlan'ny aceproxy dia azonao atao ny mamerina azy-
Nanoratra fampianarana kely sy script aho mba hanamorana ny famonoana.
Mamaly an'i darco
David Martin dia hoy izy:
Amin'ny ampahany amin'ny fametrahana azy amin'ny Ubuntu 16.04, rehefa milaza ianao fa misintona sy mametraka ireo rakitra ireo, ahoana no hametrahanao azy ireo? Rehefa misintona sy manaisotra azy ireo aho, ny sasany dia rakitra maimaimpoana ihany ary ny sasany, tsy haiko ny "mametraka" azy ireo
Misaotra mialoha sy arahaba.
Valiny tamin'i David Martín
vafe dia hoy izy:
Na ny lakile tsy mandeha intsony, na misy hadisoana ao anaty fonosana, fa amin'ny arch sy manjaro dia tsy azo atao ny mametraka azy.
Rehefa manandrana mametraka fiankinan-doha (qwebquit) na zavatra toa izany dia miditra anaty loop ary tsy misy lalana.
Nisy nahita ny vahaolana ve?
Mamaly an'i vafe
Salama, amin'ny fametrahana amin'ny linux arch dia tsy maintsy ataonao izao manaraka izao:
-Mampidira ny fonosana 'acestream-launcher' avy aminao miaraka amin'ny 'yaourt -S acestream-launcher' (ny fonosana izay ampandehaninay manaraka dia alaina ho azy ho anao)
-Alefaso ny servisy acestream-engine.service, miditra ny terminal izahay ary amin'ny maody ROOT dia apetrakay manaraka ity
-systemctl manomboka acestream-engine.service
-systemctl mamela ny acestream-engine.service
Namerina namerina ilay solosaina aho taorian'io, tsy fantatro raha ilaina izany fa raha sanatria
-Tsy tokony ho ampy izany, fa tamin'ny fanavaozana farany ny Arch dia nanodinkodina zavatra iray izy ireo ary tsy mandeha izany, ka nitady vahaolana vonjimaika izy ireo, izany hoe ny fisintomana rakitra, dia ireto manaraka ireto:
loharanom-baovao: https://aur.archlinux.org/packages/acestream-launcher/ (amin'ny hevitra)
raha vao sintonina dia mankany amin'ny terminal izahay ary mankany amin'ny folder izay nakarantsika azy,
Manohy ny fametrahana azy amin'ny 'sudo pacman -U python2-m2crypto-0.23.0-2-x86_64.pkg.tar.xz' ary izany no izy, tokony handeha izy io, amin'ny fotoana voalohany tsy andehanany mihitsy ka dia manindry fanindroany aho, amin'ny fotoana voalohany foana manome lesoka, dia izay ihany
PS: hazavao fa ny sudo pacman -U ary tsy -S satria fonosana eo an-toerana azo avy amin'ny makepkg
Misaotra betsaka noho ny mahaliana anao.
Efa imbetsaka aho no nanandrana azy fa efa fantatro ny fiankinan-doha, sy ny hevitra momba ireo fonosana amin'ny fametrahana miaraka am-ponao. Hanaraka ny torohevitranao miaraka amin'ny mpandefa iraka aho ary hijery raha tsara vintana aho. Holazaiko anao.
Averiko ny fisaorana
Amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa dia tsy mandeha izy io. Efa nanandrana ilay rohy napetrakao tamin'ny fanehoan-kevitra aho, saingy tsy mahavaha izany, manaiky ny rohy izy, manome ahy safidy hisafidy ny programa, misafidy acestream-launcher aho fa tsy misokatra ny VLC.
Ao amin'ny console dia manome ahy ity valiny manaraka ity.
File «/usr/lib/python3.6/site-packages/psutil/ao anatiny.py », tsipika 1231, amin'ny _send_signal
Tsy maintsy miandry fanavaozana vaovao isika.
Aorian'ny fanavaozana vaovao dia ity manaraka ity ny valiny ao amin'ny console.
Maotera Acestream mandeha.
2017-07-28 18: 16: 59,615 | MainThread | acestream | hadisoana mandritra ny fanombohana
Rakitra «core.c», andalana 1590, amin'ny
Rakitra «core.c», andalana 144, amin'ny
Rakitra «core.c», andalana 2, amin'ny
ImportError: tsy afaka manafatra anarana __m2crypto
Hadisoana amin'ny fanamarinana amin'ny Acestream!
Media Player tsy mandeha ...
Mihatsara izahay, izao dia manaiky ny acestream, fa ny libcrypto kosa mitohy miady.
Niezaka aho tamin'ny fametrahana ny fonosana izay atolotrao amin'ny rohy izay nandefasanao ahy.
Ary mamaha ny olana amin'ny fomba mahomby izy io, misokatra ny vlc ary miasa ny Acestream.
Misaotra betsaka noho ny fanampianao-
Salama, azafady noho ny fahatarana, tena hafahafa fa tsy niasa ho anao io tamin'ny fotoana nanatanterahako izany, ao amin'ny plasma plasma aho, faly aho fa nanampy anao io, izany no ilantsika
Amin'ny fizarana hafa ananako dia ny Fedora, ny zavatra ananako dia ny aculateo maka tahaka ny divay ho an'ny windows xD, raha sanatria ianao mankany amin'ny distro hafa na Arch mihitsy, ny tena mahagaga ahy dia tsy any Debian no ananany ireto fonosana ...
mpanao matsiro01 dia hoy izy:
Salama ary ny rakitra dia ny fametrahana azy dia mbola zazavao aho, arahaba
Mamaly an'i manjarista01
Napetrany tao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony
chemabs dia hoy izy:
Omaly dia napetrako ho toy ny fonosana haingana ao amin'ny Kde Neon 5.8 ary gaga aho fa tsotra sy haingana ny fomba fiasa ho ahy. Tsara raha manavao ilay lahatsoratra ianao satria tsy misy fampitahana, notsorina kokoa ny fizotrany.
sudo apt apetraho snapd → apetraho ny rafitra fitantanana fonosana snap (raha tsy apetrakao izany)
snap find acestream → hijerena fa manana ny programa ao amin'ny trano firaketana izahay (tokony hanana izany ny derivatives ubuntu rehetra)
sudo snap mametraka acestreamplayer
Mamaly an'i chemabs
Antonio Manzano dia hoy izy:
Marina ny anao. Vao avy nametraka azy io tao amin'ny kubuntu 17.10 aho, satria tsy azo tanterahina mihitsy ilay fomba hita eto. Misaotra betsaka
Mamaly an'i antonio manzano
tsy mitombina amin'ny maritrano i386
Mamaly an'i Papito
sie9k dia hoy izy:
Io no fomba tokana nahafahana nametraka azy tao amin'ny Lubuntu 16.04.4, saingy tsy misy fomba ahafahako mitahiry ny fisie config ary mila manamboatra parabola aho hiara-miasa amin'i Serviio. Misy hevitra hanarenana azy?
Mamaly an'i sie9k
Lahatsoratra tena tsara. Pejin-tranonkala tsy maintsy vakiana ho an'ireo Newbie Linux.
peter ny rookie dia hoy izy:
Ahoana no hametrahanao azy amin'ny AntiX 16 (fizarana linux)?
Efa nanandrana toy ny Arch Linux sy ny derivatives aho fa vao haingana aho dia tokony ho diso
Mamaly an'i rookie peter
Salama, miaraka amin'ny fonosana sna, izay lazain'ny mpiara-miasa etsy ambony amin'ny hevitra iray, nanjary mora kokoa tsy ho an'ireo fizarana ireo ihany fa ho an'ny maro. Ny fizarana mifanaraka amin'ireo fonosana ireo dia eto:
Amin'ny Debian dia toy izao manaraka izao:
-sudo apt apetraka snapd
-sudo snap mametraka acestreamplayer
Ao amin'ny Arch and derivatives:
-sudo systemctl mamela - izao snapd.socket
Ao amin'ny Arch (plasma) dia voatery namerina indray aho mba hiseho ireo fonosana napetraka, raha tsy miseho dia efa fantatrao izay tokony hatao.
Ao amin'ny ubuntu sy ny derivatives heveriko fa ho toy ilay mpiara-miasa nametraka azy io etsy ambony ireo fanehoan-kevitra miaraka amin'ny neon KDE.
Mahaliana fa amin'ny Gnome miaraka amin'i Debian dia toa ratsy tarehy izy ary tsy mifangaro tsara amin'ny GTK fa amin'ny Arch plasma dia mitambatra tsara, ny zava-dehibe dia ny fahitana azy ivelan'ny estetika.
mampiditra motera acestream anao ve izany?
Salama, tsia, tsy apetrakao izy io, ary tsy mila, miaraka amin'ireo fonosana haingana rehetra voasarona ny fiankinan-doha, tsy maintsy miasa eny na eny.
txuber dia hoy izy:
Salama Alejandro, jereo raha afaka manampy ahy ianao
[txuber @ manjaro ~] $ sudo systemctl mamela – izao snapd.socket
Tsy nahomby tamin'ny famitana ny singa: Unit file \_ xe2 \_ x80 \_ x93now.service tsy misy.
amin'ny manjaro Manjaro XFCE Edition (17.0.4) x64
Mamaly an'i txuber
Salama, Manjaro dia tsy madio Arch ary mety hiova kely ny zavatra, mety efa azo alefa ary tsy ilaina ny manao izany, heveriko fa efa nanandrana nandingana an'io dingana io ianao ...
Vantany vao apetraka izay hatao? Satria tsy apetraka ny mpilalao ace, tsy haiko ny mampandeha azy.
Misy olona manampy ahy azafady?
Valiny tamin'i Debian
Raha ny napetrakao no acestream-launcher, rehefa tsindrio ny rohy iray dia hanontany anao amin'ny alàlan'ny fampiharana izay tianao hanokafana ilay rohy i acestream dia lazainao izany amin'ny VLC, ary io no hahavita ny asan'ny mpilalao ace.
Salama Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny fanampianao. Maneho hevitra aho. Nametraka ny fonosana snap acestream ao amin'ny Debian 9 miaraka amin'ny gnome aho. Rehefa any arenavisión, izay no tadiaviko dia tsindrio rohy acestream ary miseho ny varavarankely izay manome safidy roa ahy, ny voalohany dia acestreamengine fa raha tsindrio io dia tsy misy n'inona n'inona ary ny faharoa mifidy rindranasa hafa dia omeko izany hisafidianana fa tsy hisokatra ireo rindranasa napetraka, hisokatra ny fampirimana an-trano, ka tsy haiko ny mifidy ny vlc.
Miaraka amin'ny mpandefa acestream dia tsy mandeha tsara akory io, tsara kokoa ny mametraka miaraka amin'ny fonosana Snap raha manazava amin'ny hevitro etsy ambony aho.
Miezaka ny mametraka ilay fonosana snapd aho fa tsy avelako izany:
E: Tsy hita ilay fonosana snapd
Misaotra betsaka, io dia iray amin'ireo programa nampiasako tamina varavarankely ary tiako hanana izany amin'ny linux
Misaotra Chemabs sy Alejandro! Tonga lafatra amin'ny Ubuntu 17.10
snap mahita acestream
Ny zavatra tsy mampino dia ny fandehananao mankamin'ny tranonkala ofisialy ary mandefa lahatsoratra aminao izy ireo amin'ny forum misy azy ireo manomboka amin'ny 2014! Ary ao ihany no noresahin'izy ireo hatramin'ny Ubuntu 13.04!
Marco Barria dia hoy izy:
tsara, araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha fa tena mety amin'ny snapd in arch:
sudo systemctl mamela snapd.socket
Mamaly an'i marco barria
mchavez dia hoy izy:
Salama, ary misy fomba hametrahana ny ace stream nefa tsy mila programmer ... toy ny atao amin'ny windows
Mamaly an'i mchavez